Ujyaalo Sandesh | » संसदमै रोकियो प्रधानमन्त्रीको ‘चाहना’ ! संसदमै रोकियो प्रधानमन्त्रीको ‘चाहना’ ! – Ujyaalo Sandesh
संसदमै रोकियो प्रधानमन्त्रीको ‘चाहना’ !
सभामुखले १७ असारसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेपछि तत्काल अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा ब्रेक लागेको छ ।
‘एमसिसी पढेको मान्छे मैले भेटिनँ । एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ । पढ्नेभन्दा पनि हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन ? खुट्टाले टेकेर हिँड्न छाडेर टाउकाले टेकेर, हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ । खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो पढेर ठीक–बेठीक यहाँ–यहाँ छ भनेर भन्नुचाहिँ एउटा कुरा हो । लहैलहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो भन्या छन् । कहाँँ पढ्छन्, के पढ्छन् ! अचम्म लाग्छ मलाई,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘कागले कान लग्यो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि, दुख्या छैन भने होइन होला भन्ने थाहा पाउनुप¥यो नि पहिले । दुख्या छैन तैपनि सुटुक्कै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नुप¥यो नि कान छ कि छैन भनेर । दुख्यो–दुखेन पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने ! अनि लहैलहैमा कुद्ने ! यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई !’
‘एमसिसी यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुप¥यो । अघिल्लो सरकारले वार्ता ग¥यो, छलफल ग¥यो । एमसिसी सम्झौता ग¥यो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले यस सरकारले सभामुखको टेबुलमा संसद्को अनुमोदनका लागि प्रस्तुत ग¥यो । यो एमसिसी यो सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरेको हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको भनेर यो सरकारले अलपत्र छाड्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको पक्षमा भनेका थिए, ‘त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूको बीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिनिर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ । त्यसपछि त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने ? अहिलेको सरकारसँग ग¥यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिनँ भन्यो भने कसरी गर्ने ?’
यति मात्र होइन उनले सम्झौता गर्नेवेला हरेक देशको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होसियार नभए त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्न उनको चेतावनी थियो । एमसिसी सदनमा रहेकाले यो पास गर्ने–नगर्ने सदनकै जिम्मा रहेकोसमेत उनको भनाइ थियो । ‘एमसिसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने, यो सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्न सक्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘दलहरूमा छलफल गर्नु छ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुप¥यो । फेल गर्नुप¥यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
जारी छैटौँ अधिवेशनमा मात्रै होइन, पाँचौँ अधिवेशनको सुरुतिर पनि उनले एमसिसी जसरी पनि सोही अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । १४ माघमा नयाँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई शुभकामना दिने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको प्रसंग घुसाएका थिए । उनले एमसिसीलाई जोड्दै भनेका थिए, ‘हामी विलम्ब भइसकेका छौँ । अब त्यो विलम्ब गर्नुहुँदैन । तीव्र गतिमा अघि बढेनौँ भने पछि पर्छौँ । यतिवेला धेरै विधेयक पास गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ । एमसिसी पास गर्नुपर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पाँचौँ अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने बताए पनि अघि बढेको थिएन । त्यसअगाडि एमसिसीलाई लिएर नै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मनमुटाव सार्वजनिक भएको थियो । ३१ असार २०७६ देखि एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सचिवालयमा दर्ता भए पनि यो संसद्मा भने टेबुल भएको छैन । नयाँपत्रिकाबाट